Fananganana fananganana trano fanorenana trano Sina - mpanamboatra sy mpandraharaha momba ny fanorenana China - Cixi Wenap International Trading Co., Ltd.
Home > Products > Fiarovan-tena sy fanakam-basy > Fananganana fananganana fanorenana
Ny metal L bracket dia napetraka ny Flagship Products amin'ny tsenan'ny varotra metal ao WENAP izay sokajina amin'ny fitaovana, ny fitsaboana amin'ny tany, specification tsy misy torolalana fitaovana. Misy ampahany manan-danja ny ampiasaina mba hampifandraisana ny varavarankely sy ny varavarankely, hahatonga ny varavarana ho mafy orina kokoa. Tsy tafiditra eto ireo basy ireo.
WENAP, miorina ao amin'ny tanànan'i Cixi ao Ningbo, Shina, dia mpanolotra matihanina manana rivotra, andilan-tseranana ary vokatra mafana. Manolotra ny vokatra sy ny serivisy maneran-tany izahay ary tena ankasitrahana amin'ny tsena samihafa isan-karazany. Manana baiko mendrika izahay izay misy karazana jiro amin'ny rindrina, ravina boribory, ravina simenitra, ny rivotra, ny rivotra, ny famantaranandro, ny trano fisakafoana, ny trano fisakafoana varavarankely, ny vokatra matevina Nd-Fe-B sy ny fitaovana hafa, ary koa afaka manampy anao hampivelatra vokatra vaovao mifototra amin'ny ny fepetra takiana amin'ny fifanintsanana sy fifanarahana tsara.
Manana orinasa tompon-trano izahay, afaka manolotra anao ny loko rehetra tianao hikorontana, vatofantsika plastika, plastika rindrina plastika, fantsona plastika fitrandrahana. Ny kalitao tsara sy ny enta-mavesatra, ampiasaina betsaka, fametrahana, manatsara ny fahaiza-manao sy ny fahamendrehana, ny vidin'ny fametrahana ny vokatra tsara sy ny fahamatorana tsara, ary ny fanoherana mafy, fa tsy mafy orina, tsy harafesina, fanoherana marefo, fanoherana.
Izahay dia orinasa mpanamboatra sy mpivarotra fanenomana nandritra ny taona maro tao Ningbo ary nahazo traikefa manan-karena, ny karazam-pandrefesana na tsy fanarahan-dalàna rehetra dia tokony hampifanaraka araka ny sary nataonao. Hanolotra ny vidin'ny fifaninanana sy ny kalitaon'ny mpanjifanay izahay.
Izahay dia orinasa orinasa miaraka amin'ny orinasanay manokana ao Shina ary manana traikefa mihoatra ny 5 taona amin'ny famolavolana sy famokarana fizarana, vatofantsika, fibre, kofera, tsindrona etc.Providing tolotra manokana, OEM dia misy raha manome mpanjifa sy sary. Ny tsenantsika lehibe dia Eoropa, Amerika ary ny vokatra azo atao amin'ny fotoana.
Ny orinasanay dia mamokatra sy manondrana andiam-bolana maromaro amin'ny bozaka samihafa, mametaka bozaka. Ny lohan'ny fanoratana sy ny fametahana ny bozaka, ny loha tselatra, ny loha fisaka, ny hex ny head, ny hex washer, ny head hexSocket, ny fantsom-panotan-doha, ny lohalika, ny fanovana ny lohalika ary ny fanindriana an-tsokosoko ho an'ny hazo Na asa metaly. Ny fitaovana ampiasaina amin'ny famokarana tsindrimandry dia matetika C1022 baolina karbonika ambany, Steel AISI304, AISI302, AISI201, AISI410 ary ho an'ny safidim-bahoaka maro dia miangavy antsika mivantana.